Soomaalida Marxaladee ayaynu ku jirnaa ?! | Saadaal Media
Soomaalida Marxaladee ayaynu ku jirnaa ?!
Nin oday ah ayaa yiri waxaan ka qayb galay shir reerku leeyahay, hadii aad aragto dadka ay doonayaan inay soo Sharaxdaan layaab ayaa ku dilaya, waa dad aan waxba lagu aamini karin.
Bal ka waran nin beeraley ah oo doonaya inuu wax beerto, laakiin aan xiliyada kala garayn, waqti roobaadka ayaa wax la beertaa, bal ka waran hadii uu jiilaalka wax beerto, dadku sidee ayay u arkayaan, waxay oranayaan keliya wuu waalanyahy, ama waa qof garaad gaaban.
Waa mida labaad eh waxa ku dhacaya ninkii beeraleyda ahaa tacab khasaar.
Hadaba illaa aynu garano xilliga aynu ku jirno ka bixi mayno xaaladan tiiha ah ee aan la dhibtoonayno , tusaale mar uu Rasuulku SCW ka hadlay Dajjaal wuxu yidhi hadii uu idinku soo baxo anoo jooga anaa idiin doodaya hadiise uu soo baxo gadaashay qof walba isaga ayaa naftiisii u doodaya ama waa sida uu yiri eh.
Waqtigan wadaadka la yiraahdo ImranHosein iyo culimo kale oo badan waxay aaminsanyihiin in Dajjaal la soo daayay uuna talinayo , uuna ku shaqaysto kuwan maanta ina jaahwareeriyay waa siyaasiyiinta noocyada badan ee khaaimiinta ah waa kuwa laynagu dhexbeeray .( dadka qaar baa u haysta marka la soo qaado yajuuj iyo ma juju, dad nooc kale ah, waar waa reer baniaadam oo adiga oo kale ah, hal sifo ayay leeyihiin waa mufsidiin, fasahaadinaya diin iyo dadba, kuwa laynagu dhex beeray, miyaanay wadaad iyo waranleba fasahaadin, maxaad sugaysaa ).
markaa dadka caynkaa aaminsan iyo kuwa kale, nolosha ma isku si ayay u arkayaan, waa maya. Lakala garaad dheer !
Hadaba waxa la gudboon muslimiinta in la garto marxalada aynu marayno, hadii aan la garan marxalda aynu marayno marwalba waa layna Khiyaamaynayaa .
hadii aynu garano marxalada aynu marayno way fududahay inaynu ka gaashaamano, hadii kale se waa layna dagayaa, waa sida aynu imikaba u daganahay eh oo aynaan waxba u ogayn .
Ayaad quraan ah ayuu macnaheedu ahaa, hoogeenee illayn qaflad ayaynu ku jirnay, Hada ayaynuba Qaflada ku jirnaa, waynu daganahay. Somalidu waxay tiraahdaa wan wayn illaa la gawraco indhihiisu cirka ma arkaan, markaad marxaladaa gaartaana waa mar ay xeero iyo fandhaal kala dheceen, oo aanad waxba ka qaban karin.
Diyaariyey : Cabdirisaaq jubba
Halkan hoose kala xiriir.